I-ANC ilungisa indida ngomengameli
Ezindaweni zesifunda iNkosi Bhambatha, eNquthu naseMsinga, kuvele ukuthi kusenokudideka emphakathini yakhona esakholwa ukuthi uZuma usengumengameli.
INTATHELI YESOLEZWE | January 28, 2019
UBUHOLI be-ANC KwaZulu-Natal busemkhankasweni wokuqeda ukudideka kubantu basemakhaya mayelana nokuthi ngubani umengameli obusayo phakathi kukaMnuz Cyril Ramaphosa noMnuz Jacob Zuma.
Lokhu kuvezwe yiPhini likakaNobhala we-ANC KwaZulu-Natal, uMnuz Sipho Hlomuka izolo, kulandela ukuthi ezindaweni zesifunda iNkosi Bhambatha, eNquthu naseMsinga, kuvele ukuthi kusenokudideka emphakathini yakhona esakholwa ukuthi uZuma usengumengameli.
“Nakuba kungezona zonke izindawo zasemakhaya ezicabanga kanjalo kodwa kulezo okunalokhu kudideka simatasa ngokusizana naye uMsholozi ukutshela abantu ukuthi uRamaphosa sekunguye umengameli wethu obusayo manje. Okunye ukuthi siyazi ukuthi okuphambili kubantu njengoba kuzovotwa akuyena umengameli kodwa uKhongolose,” kusho uHlomuka.
NgoMgqibelo uhambele eDundee eNkosi Bhambatha nasesifundeni iMalahleni, eMajuba naseNewcastle.
EDundee kube nezinkingana ezincane lapho abakwa-IEC kuthe uma befika eGlencoe bathola indawo abebeyiqashile isithathwe abanye kodwa bagcina sebegxumeka itende eceleni ukuze abantu baqhubeke babhalise.
Izolo umholi we-IFP ojutshwe, eMzinyathi, uMnuz Nhlanhla Msimango ubephithizela eNquthu naseDundee egqugquzela abantu ukuba bayobhalisa. ENquthu kube nokuphazamiseka KwaHlazakazi umphakathi uvale umgwaqo ngamatshe ungafuni kudlule abakwa-IEC. Umphakathi ubukhala ngentuthuko yomgwaqo, amanzi namathuba emisebenzi wathi awuyingeni eyokubhalisela ukuvota. Kusize ukufika kwamaphoyisa azame ukuhlakaza iqulu ebelivale umgwaqo odlulela ezikoleni obekubhaliselwa kuzo.
Umholi weNFP, uNkk Zanele kaMagwaza Msibi ubeseZululand wavakashela izikhungo obekubhaliswa kuzo.